Sidee inuu ka soo kabsado lumay photos / video ka kaadhka xusuusta Kingston
Kingston kabashada kaadhka xusuusta: 3 tallaabo si aad u hesho dib u files lumay
Kingston waa mid ka mid ah kaadhka xusuusta keentay adduunka ee manufactures iyo alaab. Waxaa inta badan waxay bixisaa sadex nooc oo kaararka xusuusta kuwaas oo kaararka Flash ama CF Compact, kaararka Digital Secure sawiro iyo videos, iyo kaararka SD u telefoonnada gacanta. Waxa ay si weyn u isticmaala dadka dunida ku saabsan kaamirooyin iyo taleefanada gacanta. Iyadoo la raacayo, "Waxaan soo kaban karaa si qalad ah sawiro iyo videos tirtiray ka kaadhka xusuusta Kingston?" waxaa la weydiiyay iyo aad u badan oo ay dadka.
Jawaabtu waa HAA. Waxaad soo kaban karto, sawiro iyo videos lumay ay sabab u tahay la tirtiro, formatting ama sababo kale oo ka kaadhka xusuusta Kingston, laakiin waxaa jira hal wax oo aad u baahan tahay in maskaxda lagu hayo waa: Ha saarin wax files cusub oo aad kaadhka xusuusta Kingston marka aad ka heli wax laga badiyay, ama faylasha lumay la overwritten laga yaabaa doono, taas oo ka dhigi doonaa kabashada kaadhka xusuusta Kingston adag.
1 Sidee inuu ka soo kabsado lumay photos / video ka kaadhka xusuusta Kingston
Marka hore, waxaad u baahan tahay gargaar ka mid ah qalab xasuusta soo kabashada kaarka inuu ka soo kabsado files lumay ka kaadhka xusuusta Kingston. Looma baahna inay hareeraha eegaan, oo halkan waa soo jeedinta: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Labaduba waa Softwares lagu kalsoonaan karo oo si buuxda u taageeraan dib u soo kabashada ee kaadhka xusuusta Kingston. Waxaad soo kaban karto dhammaan faylasha aad kaadhka xusuusta Kingston oo ay ku jiraan sawirrada, cajaladaha iyo files audio.
Download version maxkamad free of this kabashada software kaadhka xusuusta Kingston hoos ku qoran, iyo waxa ay haatan u qaadan lacag la'aan ah.
2 Kingston kabashada kaadhka xusuusta: 3 tallaabo si aad u hesho dib u files lumay
Step1 Connect kaarka Kingston in kombiyuutarka
Connect camera ama telefoonka gacanta si aad u computer la cable USB ah, ama isticmaal akhristaha kaarka si toos ah xirmaan kaadhka xusuusta aad. Markaas abuurtaan barnaamijka, oo guji "Start" on interface ugu muhiimsan sida raaco si ay u bilaabaan Kingston kabashada kaadhka xusuusta.
Step2 Scan aad kaadhka xusuusta Kingston
Next, dooratid kaadhka xusuusta Kingston oo uu bilaabo inuu iskaan files lumay it on.
Step3 Kulanka Xiisaha Leh ceshan photos / videos ka kaadhka xusuusta Kingston
Scan ka dib, dhammaan recoverable photos, videos iyo files audio waxaa la helay iyo soo bandhigay. Waxaad ku eegaan kartaa mid ka mid ah sawirrada oo ay ka mid, oo hubi inuu ka soo kabsado dhammaan faylasha la mid click.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad kaadhka xusuusta Kingston. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Thumb Drive
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos / Videos ka Kingston Memory Card